guide design Product - HKY caaryada
Madaxda heli isticmaalo naqshado badan oo qayb ka ah sida dhibcood lifaaqa iyo shirka. The kala duwan ugu caansan ka kooban yahay saadaasha cylindrical rito loogu talagalay si ay u helaan boolal, qobays dhafnaa, ama noocyada kale ee hardware fiiriyey. Guud ahaan, dhexroor dibadda ah madaxda waa sii gudahood 2.0 si 2.4 jeer dhexroorka ka baxsan fur ama warqadda
Waxaa la soo jeediyay in laga fogaado madaxda in milmaan galay sidewalls maxaa yeelay, waxay abuuri karaan qaybaha qaro weyn oo keeni inuu dego. madaxda ku habboon waa in loo ka sidewall iska taagan yahay, iyo haddii loo baahdo, isticmaal xira feeraha taageero. Isku day inaad la isticmaalayo naqshado Tababaraha furan yahay madaxda u dhow derbiga taagan a.
Duritaanka Qaab caaga, Plastic Injection Bottle Cap Mold, Mold For Plastic Injection, Plastic Injection Moulding Components,